Villa Somalia oo markii ugu horraysay ka hadashay dagaaladii Muqdisho & qorshaha xiga.
May 4, 2021 Xuseen 21
Puntlandtimes (MUQDISHO)-Madaxtooyada Soomaaliya ayaa marki ugu horeeysay ka hadashay dagaaladii ka dhacay Magaalada Muqdisho ee u dhexeeyay dowladda iyo Mucaaradka ee ka dhashay muddo kordhintii labada sanno aheyd ee la sameeyay.
Agaasimaha Warbaahinta Madaxtooyada Cabdirashiid Maxamed Xaashi oo wareysi siiyay Telefashinka Dalsan ayaa waxaa u marka hore sheegay inay ka xun yihiin dhibaatooyinkii ka dhacay Muqdisho ee u dhexeeyay Ciidanka Dowladda iyo kuwa Mucaaradka.
Cabdirashiid Maxamed Xaashi ayaa waxa uu sheegay in dowladda federalka ah ee Soomaaliya ay ka baaqsatay inuu dagaal dhaco, hayeeshee la isku soo hubeeyay, isla markaana qeybo kamid ah Caasimadda laga abuuray rabshado sabababy khasaaro kala duwan.
Waxaa uu sheegay Agaasimaha in dagaalkii u dhexeeyay Ciidanka dowladda iyo kuwa Mucaaraadka ee kasoo horjeeday muddo kordhintii la sameeyay uu sabababy in Degmooyin ka tirsan Gobolka Banaadir laga barakaco, taasina ay ka xun yihiin.
Sidoo kale Xaashi ayaa Carabka ku dhuftay in dowladda ay wado daraasad ay ku ogaaneyso tirada dadkii ku barakacay dagaaladii dhacay, isagoona daraasad hordhac ah ku tilmaamay mid ay QM kasoo saartay dadkii barakacay oo ku sheegtay inay dhexeyso tirada dadkii guryahooda ka barakacay 60,000 illa 100,000 oo qof .
Isaga oo sii hadlaayay ayaa waxaa uu tilmaamay in muhiim ay tahay in wax kasta oo khilaaf ah oo jira lagu dhameeyo wadahadal, isagoona xusay in Ra’iisul Wasaare Rooble uu wadahadal xiisadii ka dhalatay muddo kordhinta kala yeeshay mucaaradka.
Ugu dambeyn Agaasime Xaashi ayaa beeniyey in Madaxweyne Farmaajo loo sameeyay muddo kordhin laba sanno ah, wuxuuna tilmaamay inay ka shaqeynayeen sidii ay u dhici laheyd Doorasho qof iyo Cod ah, isla markaana Mucaaradka looga baahnaa inay dulqaataan, iyadoona Madaxweynaha maamulka Doorashada ku wareejiyay Ra’iisul Wasaare Rooble.
Muxuu soo kordhinayaa hadalka Xaashi maanta sheegay? Farmaajo markuu hadlay ayey ahayd inuu ka hadlo waxaas iyo wax la mid ah. Waa hadal agoon iyo rajay ah oo aan waxba tarayn.
Xaashina muxuu ahaa,af nooli hadal ma daayo.
@@@ BARAWAANI KING/WIIL QARDHO!
Ninyahow marka hore ma aqaan qaab aan kuula hadlo. Oo weli MAREEXAAN u dardaar werintii ayaad wadaa adiga oo aanan Jawaab faahi ahi iga siin, Su’aasha aan arrintaa kaa weeydiiyey ee kore!
Marka xiga, jubaland uu Mareexaan ka maqan yahay ma garan kartaa awooda uu Daarood ku lahaanaya inta aay la egtahay?
Midda labad, awooda Daarood ee Soomaalida xorta ah ee aay ka maqanyihiin Mareexaan iyo Dhulbahante, waa kee Daaroodka laba ku lulanaya ee iska caabin kara, IRIRKAN cirib tirka Daarood isku raacsan ee aan ka caajisin habeen iyo maalin?!
Midna aan kaa saxee, ninka doqonka aad iigu halqabsatay u hiilliyey Nabi YUUSUF ma ahane waa Nabi MUUSE C. S!
Fiicnaan lahaydaa in uu daarood leeyahay 4 maamul oo labada aad ku darsatay ee ku jira Gacanta Kenya Iyo Itoobiya aay xor yihiin!
Waa kuu aragti gaabni in aad inkirto kii garab iyo Gaashaanba kuu ahaa ee kugula noolaa intii xorta ahayd, oo aad ku xisaabtanto mid in aad adigu xoreeyso kaaga baahan oo aay qoor Sagaaro ku hayaan, AMRAARO iyo KIKUYU! kkkk
Hashi waa ninka qaba qoraaga Puntlandtimes.
Haa waa jirtaa, maalin MAREEXAAAN wax ka ahaa JUBBALAND. Maalintaase waa gabal dhacay, dibna u soo noqon meeyso…
Hadii aad raabto in aad JUBBALAND wax ka noqoto, urod ku noqo HABAR GEDIR.. Sidii futada uga soo leefi jidhay u soo liif.. GEN. Indhacade wali waa nool yahay.. Marka laga yaabee in aad dib u soo nolaysaan wixii la dhihi jidhay DOOXADA JUBBA.
Ama u soo leef futada HABAR GEDIR ama ha u soo leefin, MAREEXAAN waxba kama ah JUBBALAND..
Maantay, waxaa JUBBALAND kaaga awood badan, iska daa DAAROODKA, SHEEKHAAL iyo GAALJECEL.
Ma aragtay xaafadihii aad degnaan jirtay ee DALXIISKA.. Orod soo eeg dadka degan iyo sida laguu dhaqan wareejiyey..
Iska daa KISMAAYO, orod tag maantay BAARDHEERE… xooga maleeshiyaad MAREEXAANA mooyee, shacabko waa CAWL-YAHAN, DIGLOO MIRIFLEE.
MAREEXAAN, Gobolka GEDO wuxuu ka degaa oo kaliya: BUULO XAAWO, DOLOWW, GARBAHAREEY, BUURDHUUBO.. Inta kale waa lala degaa, gaar ahaan LUUQ oo ay idin la degaan DIR iyo DIGLO MIRIFLE..
Marka, xooga aad sheegayso ma waxaad ka wadaa kuwa DUUFAAN loo bixiyey ee wardiyeeya XAAR FARMAAJO..
MAREEXAAAN waa in uu is-dabo qabtaa… Hadii kale adoonse baad geli doontaan.. sida gobolla dhexe la idin ka raray baa GEDO la idin ka rari doonaa…
Awaay BALANBALI, aaway DHUUSAMAREEB, aaway XIRAAALEEE…
Maxaa idin ku uruuriye CAABDUWAAQ..
Afarta (4) DAWLADOOD ee:
=== DDS ee ETHIOPIA
=== NFD ee KENYA
MAREEXAAAN waxba laga weydiin maayo.. ILAAAH WEYNI weey leeyiheen.. RAGNA waa leeyahay..
FUTUXUMI, MAREEXAAAN, waxba laga weydiin maayo.
HADII LA YAABO, YAASIINKA YAASIINKA
HADII LA YAABO, YAASIINKA, YAASIINKA
Xaashi.. muxuu yahay ? ma dagaal ayuu joojin karaa.. yaaaab
Ninkii magacaan isticmaali jirey ma qori jirin waxa aad qortay wax la mid ah. Haddi aadan isagii ahayn, magaciisa ha uga xaarin.
Haddii uu isagii yahayna, waa dufoobay oo wuxuu lasoo baxay waxa uu yahay ee dhabta ah.
Tan kale, Puntlandtimes nin rag ah baa qora. Haddii adigu tahay khaniis la qabo, hadde ogoow dadku adiga kale ma wada aha.
Dugsi malaha qabyaaladi waxay dumiso mooyaane……….
Anuunbaa damqanayee dhaguhu uma daloolaane.
Ereyadii: Abdulahi Suldan Timacadde
Ninyahow, waxaad wadataa magaca Barawaani waxaadna tiraahdaa ‘ibtiyaal’, marka, haddii reer abti laguu yahay u dhaqan sidaas, ogoowna inaadan Daarood ahayn, Daaroodna iskaa xigo.
Mr. A. xade iyo Mareexaanba waad ku xadgudubtay, waxaadna ku hadashay fuxshi iyo wax aan Daarood isku oran iskulana hadalin si kasta oo ay u murmaan sababtoo ah waxaad tahay shisheeye aan waxba xeerinayn.
A. Xade waa nin si qunyar-socod ah u hadla oo aysan qaadin caadifad Mareexaannimo. Ma fahmin meesha aad kala qaadday!
Haddii aad Barawaani tahay, waxaa hiil kaaga baahan beeshaada la ogyahay wixii ku dhacay 30kii sano ee burburka. Haddii aad Barawaani tahay amase reer Qardhoba, ka fiirso hadalladaada.
AAr . ama bisad
Adiga imika caadifad qabiil ayaa ku haysa , qofna waad caananaysaa.. Yaab
Xade,, waa tuuug edaaab xun ma aha daaroood. waa Yibir.
Fadlan xaal bixi, yibirku cay maaha waa dad shaqaysta oo farsama yaqaana oo aan dadka layn oo barakicin. Maxaa ka fiican nin xooggiisa cuna.
Yibrka, Xade… Xaaal gole joog ah ayaan siiyay.
Oday biiqay.. Qabiilka yibrahu waa dad wanaagsan anigu kuma gefin, hadii si khalad ah loo fahmay waxaan qoray. Xaaal ayaan bixiyay.
Waxaan qoray oo kali ah…. Xade, waa tuug kabo la.
@@@ A. Arar:
Allah ya Cisak!
Waan arkay ninkan beleda dhiiqay, laakiin waan Soomanahay oo waxaan diiday in aan dhiiqada la qasto. Laakiin wixii aan dhihi lahaaba adiga ayaa yiri! Shukran.
Meeshan wejiyo badanta ka Kaluumeeysato ayaa badan!
Aad ayaad u mahadsantay. Xaalkaasna waa u malayn in la aqbali doono.
Marlabaad jasaakallaahu khayran. Tira yar ayaa Soomaalida raalli gelin bixisa.
War meesha waxaa isogu yimi in dad intii uskaga ahayd,war qurmuunaha dayuuska ah la baxay,Barawani King,war duf ku bax ee dadja sharafta leh magaciida u daa.magacaaga dhabta ahi waa dayday iyo baqti cuni aan insva xishood iyo asluub midba lagayn.
Waxay ilatahay in aadan maskaxiyan aadan fayoobayn ee bal dhaqtarka dhimirka bal daawo u doono.
Kuwa kalana intooda badan usko mid baad tihiin.
War ama dhaliilo wax dhisa soo qora ama qurmuunkiina joojiya.
Taariikhda markii laga sheekeeyo iyo xaqiiiqda jidha, yaan laga xumaan qalalaadkii la galay.
Anigo anoo jidha 10 sanno aan qalin iyo buug qaatay… Xasuus qorkaygu waa ii buuxaa. Markii aan soo qofo, yaan laga barooran.
Maxaad ku dhex geliyey dooda ka dhaxaysa Aniga iyo XADE. Waan qirayaa XADE in uu yahay nin oday ah, oo ixtiraam mudan.
Hase ahaatee, maxaa dhexdayada uga kaluumaysanaysaa. Waa u jeeda lahjadaada in aad tahay nin DHULBAHANTE ah.
Se fiican aan kuugu jawaabi lahaa, hase ahaaatee, waa soomanahay. Ma rabbo xaarka aad walaaqanayso in aan kula walaaqdo.
Waxaad tahay nin waalan, oo wax la murma raadsanayaa.. LAAKEEN, aayadii maxeey ka tidhi, se daada oo kale:
Marka waxaan ku leenahay .. SALAAMA…SALAAMA…..SALAAMAA
SALAAMA…SALAAMA…..SALAAMAA YAA MAJNUUUN
Barawaani King :
Adigo runtii waxaad tahay,dadka ay diinto u tahay qabyaalada Jaahiliga,adiga iyo kuwa badan oo Soomaali ah,marka waxa aad tahay qofkii kugo sheegin baqatiyahow been ma sheegin.
Qofka qabyaalado waashay,wax walva waxa uu ku cabiraa qabyaalad,
Daka qaba cudurka walida,ayaad la midtahaye ee dhaqaatirta psychiatrist ah u tag ha ku baareen,dabadeedna dowo ha kuu qoreen,ku dajisa,shaki kuma jiro in aad mujtamica aad la nooshay aad warar ku tahay.
Gunaanadkii waad jirabrahay oo cudurki ceeb ma aha ee bal dhaqtar u tag nacasyahow,dadka qiima leh magacoida u daa,ee kaaga la bax maxaad uga carari dayuus haddii aadan ahayn.